Kuphinde kwama ukusebenza komunye umbhikisho eVuwani | News24
Kuphinde kwama ukusebenza komunye umbhikisho eVuwani
Vuwani – Amanye amabhizinisi kanye nezikhungo zikahulumeni zokunikezela ngezidingo emphakathini eVuwani kuphinde kwavalwa thaqa njengoba umphakathi wakule ndawo uqale kabusha umbhikisho wawo wokulwisana nesinqumo sebhodi elikama imingcele, iMunicipal Demarcation Board (MDB).
Lokhu kungenxa yesinqumo saleli bhodi sokuchitha isicelo sokubuyekeza esafakwa abahlali baseVuwani kanye nasezindaweni ezingomakhelwane, njengoba befuna ukuthi bona bangafakwa kuMasipala waseMalamulele.
Lo mphakathi wafaka isicelo sokubuyekeza ngemuva kokuthi ithimba longqongqoshe lanxusa abaholi baseVuwani ukuba bamise imibhikisho ngoJulayi wangonyaka odlule, nokuthi babheke ukufaka isicelo sokubuyekeza okunalokho.
OLUNYE UDABA: Bekungakaqali ukufunda namanje eVuwani
Kodwa-ke ngesonto eledlule, iMDB, isichithile lesi sicelo, nokuyinto ecasule kakhulu umphakathi.
Inkosi Mmbangiseni Masia ithi umphakathi angeke usalokhu uxoxisana nohulumeni, njengoba ubona sengathi udayisiwe.
Kuzokhumbuleka ukuthi ngonyaka ka-2016 abahlali bakule ndawo bangenela umbhikisho owadonsa izinyanga ezingaphezu kwezintathu, nalapho owawuphikisana khona nosinqumo sikahulumeni sokufaka iVuwani ngaphansi kwe-LIM345, okungumasipala osempumalanga naleli lokishi. Zibalelwa ngaphezu kuka-24 izikole ezathungelwa ngomlilo kule mibhikisho eyayinodlame.
NgeSonto, amaphoyisa avale umhlangano womphakathi obuhlose ukubheka indlela ebheke phambili kulandela isinqumo sangesonto eledlule.
Aphinde avimbela nemizamo yababhikishi yokuvala imigwaqo ngamathayi avuthayo.
Okhulumela amaphoyisa, uLieutenant Colonel Moatshe Ngoepe, uthi amaphoyisa azoqhubeka nokuqapha isimo kule ndawo.